McKnight wuxuu ku dhawaaqayaa Istaraatiijiyado cusub oo lagu hormarinayo sinnaanta iyo xalka cimilada
McKnight iyo bulshada aan taageerno, waxaan haysannaa sabab aan maanta ugu dabaaldegno! Barnaamijka cusub ee Vibrant & Equitable Communities (V&EC) wuxuu ku dhawaaqayaa istiraatiijiyaddiisa iyo tilmaamaha bixinta, iyo barnaamijka Midwest Cimilada & Tamarta (MC&E) wuxuu cusbooneysiiyay istiraatiijiyaddiisa si uu uga tarjumo wajigiisa xiisaha leh ee shaqada xigta. Waxaan kugu martiqaadeynaa inaad soo booqato V&EC iyo MC&E bogagga shabakadda si aad wax dheeraad ah uga ogaato.
Sannadkan wuxuu keenay caqabado aan horay loo arag. Waxaan garwaaqsannahay in qaar badan oo ka mid ah wada-hawlgalayaasha deeq-bixiyeyaasha iyo jaaliyadaha ay la kulmaan dhibaatooyin aan caadi ahayn natiijada. Shaqaalaheennu waxay u shaqeeyeen si taxaddar leh si ay u hubiyaan in barnaamijyadan ay ku darayaan heerka fikirka iyo ka-qaybgalka bulshada ee lagama maarmaanka u ah inay xilligan la kulmaan rajo iyo dhiirranaan — iyo inay ku sii jiraan adeegga himiladeenna: si loo hormariyo mustaqbal aad u cadaalad badan, hal abuur leh, iyo mustaqbal aad u tiro badan oo ay dadku iyo meeraha ku noolyihiin.
"Ma jiri karin waqti aad u muhiim ah oo lagu dadajinayo sinnaanta Minnesota iyo xalalka cimilada ee Midwest." -KARA CARLISLE, MADAXWEYNAHA MADAXA BARNAAMIJYADA
Tilmaamaha cusub ee deeqaha iyo istaraatiijiyadaha istiraatiijiyadda ayaa ka yimid ka 2019-2020 Qaab dhismeedka Istaraatiijiyadeed, taas oo horseeday kuweena ku dhawaaqid sanad ka hor in McKnight uu sii xoojin doono ballanqaadkeenna ku aaddan horumarinta xalalka cimilada iyo dhisidda sinnaan iyo loo dhan yahay oo loo yaqaan Minnesota. In ka badan sidii hore, labadan caqabadood waxay nagu qasbayaan inaan ku jawaabno deg-degga iyo agabyada ay damaanad-qaadayaan, iyo male-awaalka iyo geesinimada ay u baahan yihiin. Barnaamijyada V&EC iyo MC&E ayaa noqon doona qoondeyntayada deeqaha ugu badan.
"Ma jiri karin waqti aad u muhiim ah oo lagu dadajin karo sinnaanta Minnesota iyo xalalka cimilada ee Midwest," ayuu yiri Kara Inae Carlisle, madaxweyne ku xigeenka barnaamijyada. “Waan ognahay ururada safka hore inay muddo dheer ka shaqeynayeen bulshadeena. Waxaan ku faraxsanahay inaan garab istaagno garbaha iyaga oo aan soo saarno ilo dheeri ah, annagoo ku faraxsan inaan sii wadno taageeradayada muddada dheer ee barnaamijyada Arts, International, iyo Neuroscience. ”
Waan ognahay in inbadan oo idinka mid ah ay si xiiso leh u sugayeen cusbooneysiintan, waana kaaga mahadcelineynaa sabirkaaga, gaar ahaan waqtigan walaaca badan. Waxaan rajeyneynaa inaan dhigno istaraatiijiyadan si ay u shaqeeyaan sanadaha soo socda.
Barnaamijka Bulsho Wanaagsan & Sinnaanta Oo Bilowday Bixinta Deeqaha
Bulshooyinka firfircoon & sinnaanta 'hadafkoodu waa u dhisaan mustaqbal firfircoon dhammaan reer Minnesota leh awood wadaag, barwaaqo, iyo kaqeybgal. McKnight wuxuu horumariyey barnaamijkan maxaa yeelay waxaan u aragnaa sinnaanta inay tahay awood isku dhufasho badan oo kobcisa tayada nolosha dhammaan reer Minnesota. Dhammaanteen waan ka faa'iideysaneynaa markaan kor u qaadno fursadda loo siman yahay iyo marin u helidda deggeneyaasha ku nool dhammaan Minnesota.
Horraantii toddobaadkan, waanu soo dhaweynay David Nicholson oo ah agaasimaha cusub ee V&EC. Wuxuu keenayaa 30 sano oo hoggaamineed, aqoon qoto dheer oo ku saabsan bulshooyinka kala duwan ee Minnesota, iyo muujinta u heellan ee xallinta nidaamyada muddada-dheer ee caddaaladda iyo sinnaanta gobolka oo dhan. Si dhow ula shaqeynta guddiga McKnight iyo hoggaamiyeyaasha sare, oo ay ku jiraan Kara Inae Carlisle, wuxuu leeyahay koox khibrad iyo firfircoon leh: Sarah Hernandez iyo Eric Muschler, saraakiisha barnaamijka; Erin Imon Gavin, maamulaha is dhexgalka barnaamijka iyo sarkaalka barnaamijka; iyo Renee Richie, barnaamijka iyo deeqaha lashaqeeyo.
Kooxda Vibrant & Equitable Communities ayaa furi doona deeq-lacageedka Oktoobar 1, iyada oo weydiimaha hore laga bilaabo Oktoobar 15. Haddii ururkaagu xiiseynayo inuu codsado, fadlan dib u eeg xeeladaha barnaamijka, cusub tilmaamaha bixinta, iyo foomamka dalabka. Wixii asal dheeraad ah, waxaan ku siineynaa tan webinar waxaan qabanay bishii Sebtember iyo a Su'aal iyo Jawaab kaas oo ka jawaabaya su'aalaha guud ee ku saabsan barnaamijka V&EC.
Fadlan la soco: Haddii ururkaagu uu dhaqaale ka helay barnaamijkii hore ee waxbarashada ama barnaamijkii hore ee Gobolka & Bulshada, fadlan la xiriir sarkaalka barnaamijka si aad ugala hadasho waqtiga codsigaaga hore ee baaritaanka.
Mar labaad, waxaan u mahadnaqaynaa 1,000+ xubnood ee bulshada iyo khabiiro ka qayb qaatay Nidaamka soo-galinta Bulshooyinka firfircoon & sinnaanta lataliye ahaan ama jawaab bixiyaasha sahanka, ama kaqeybgalayaal feker leh mid kamid ah goleyaasha bulshada. Ma awoodi karnay inaan helno isku heer oo ah istiraatiijiyadda horumarinta iyadoon lagaa helin wax ku biirintaada qiimaha leh, waxaana rajeyneynaa inaad arki doonto aragtidaada oo ka tarjumeysa sida barnaamijkaan u nool yahay.
Istaraatiijiyadaha Barnaamijka Cimilada & Tamarta ee Midwest
Himilada cusub ee barnaamijka ballaarinta Midwest Cimilada & Tamarta ayaa ah qaado tallaabo geesinimo leh dhibaatada cimilada adoo si aad ah u gooya wasakheynta kaarboonka ee bartamaha-galbeed 2030. Ku guuleysiga himiladan hamiga leh, xawaaraha iyo cabirka lagama maarmaanka ah, sidoo kale waxay u baahan tahay dimuqraadiyad caafimaad qabta, mid dadka oo dhami ay leeyihiin cod iyo awood ay isbedel ugu keenaan arrimaha saameeya noloshooda iyo noloshooda. Barnaamijka Cimilada & Tamarta ee Midwest wuxuu sii wadi doonaa istiraatiijiyaddan iyada oo lala kaashanayo barnaamijka Vibrant & Equitable Communities, isagoo ka taageeraya bulshada dhisidda dhaqdhaqaaqyo kaladuwan oo xoog badan oo isbeddel ah.
Barnaamijka Cimilada & Tamarta ee Midwest wuxuu weli u heellan yahay inuu beddelo nidaamka tamarta. Waxaan balaarineynaa shaqadeena si aan uxoojino gaadiidka iyo dhismayaasha iyo kaarboon goos gooska ah ee ka shaqeynaya dhulalka shaqeeya. Barnaamijku wuxuu dhawaan bilaabay raadinta agaasime barnaamij cusub wuxuuna dhawaan ku dari doonaa sarkaal cusub oo barnaamijka ah. Brendon Slotterback, sarkaalka barnaamijka, ayaa hogaamin doona ilaa iyo inta agaasimaha cusub ee barnaamijku meesha ka jiro, iyada oo taageero laga helayo Sarah “Sam” Marquardt, barnaamijka iyo deeqaha lashaqeeya, iyo Kelsey Johnson, Maamulaha kooxda barnaamijka.
Fadlan ogow: Barnaamijka MC&E wuxuu adeegsadaa nidaam codsi xiran. Waxaan si firfircoon u aqoonsaneynaa oo aan ku martiqaadeynaa ururada inay codsadaan oo ay aqbalaan soo jeedinta ku saabsan maalgelinta ururadaas oo keliya.
Cusbooneysiin ku saabsan raadintaada Madaxweyne cusub
Sida inbadan oo idinka mid ah ogtahay, McKnight wuxuu ku howlanaa raadinta fikirka iyo adag ee madaxweynaheena cusub. Covid-19 iyo dhibaatada bulshada iyo dhaqaalaha, iyo sidoo kale dilkii George Floyd iyo dhaqdhaqaaqii mudaaharaadka ee ka dhashay, waa horumar baaxad leh tan iyo markii aan bilownay baaritaanka. Duruufahaas awgood, waxaan go'aansanay inaan kordhino waqtiga baaritaanka. Waa lama huraan in si sax ah loo xusho hogaamiyaha saxda ah ee ururka iyo jaaliyadeena inta lagu jiro xilligan aan caadiga aheyn iyo mustaqbalka.
Pamela Wheelock ayaa soo gabagabeyn doonta muddadii ay haysay xilka madaxweynaha kumeel gaarka ah bisha Sebtember 20deeda. Waxaan u soo bandhigeynaa mahadnaq qalbigeenna leh oo ku aaddan hoggaankeeda wanaagsan ee joogtada ah iyo sida sharafta leh ee aan uga sii gudubnay dhammaadkii taariikhda aan markii hore dejnay. Lee Sheehy, oo ahaa agaasimihii hore ee barnaamijka Gobolka & Bulshooyinka muddo 11 sano ah, wuxuu qabanayaa doorka kumeelgaarka ah wuxuuna lashaqeyn doonaa iskaashi uu la yeesho kooxda hogaaminta sare si uu ugudbiyo madaxweynaha cusub. Waxaan la wadaagi doonaa warar dheeri ah markay soo ifbaxaan.
Mawduuca: Cilmi-badeedka & Tamarta Midwest, Bulshooyinka Feejignaanta & Sinnaanta ah